Sorona Masina ny 27/08/2017 - Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 27/08/2017
ALAHADY FAHA-21 mandavantaona — A
Anongilano sofina aho, ry Tompo, ka valio. Andriamanitra ô, vonjeo ity mpanomponao matoky Anao. Iantrao aho, ry Tompo fa miantso Anao tontolo andro!
Ry Andriamanitra mampiray fo aman-tsaina ny mpino, tariho izahay vahoakanao ho tia ny didinao sy haniry izay nampanantenainao, mba hifikitra amin’ny tena hasambarana ny fonay, eto anivon’ity fiainana miovaova ity.
Iz. 22, 19-23
Hapetraka eo an-tsorony ny fanalahidin’ny tranon’i Davida.
Izao no lazain’ny Tompo an’i Sôbnà, lehiben’ny ao an-dapa: “Horoahiko hiala eo amin’ny fitoeranao ianao, haongan’ny Tompo amin’ny raharahanao ianao”. Ary izao no hitranga amin’izany andro izany: Hiantso ny mpanompoko Aho, dia i Eliasima zanak’i Helkiasa, ka hampiakanjoiko azy ny akanjo vitanao, hampanaoviko azy ny samboadinao; hapetrako eo am-pelatanany ny fahefanao; dia ho tonga ray izy amin’ny mponina ao Jerosalema, sy amin’ny taranak’i Jodà. Hapetrako eo an-tsorony ny fanalahidin’ny tranon’i Davida, ka hamoha izy, tsy hisy handrindrina; handrindrina izy, tsy hisy hamoha. Hatsatoko toy ny fantsika amin’ny toerana mafy izy, ka hanjary sezam-boninahitra ho an’ny ankohonan-drainy.
Sal. 137, 1. 3. 6 sy 8bd
Fiv.: Tompo ô, mandrakizay ny hatsaram-ponao, aza atsahatra ny efa nataon’ny tananao.
Midera ny Anaranao masina aho, ry Tompo, noho ny fitiavanao sy ny fahamarinanao: nasehonao ho lehibe ny Anaranao, sy ho ambonin’ny voaary rehetra ny teninao.
Rehefa miantso aho, Ianao mamaly sy mampitombo ny hery ato amiko. Avo ny Tompo ka miondrika amin’ny iva, ny mpiavona kosa ataony tazan-davitra. Mandrakizay ny fitiavanao, ry Tompo: aza atsahatra ny efa ataon’ny tananao.
Rôm. 11, 33-36
Ry kristianina havana, endrey, lalina tsy manam-paharitana ny fahendrena amam-pahaizan’Andriamanitra, tsy azo fantarina ny fitsarany, ary tsy takatry ny saina ny lalany! Fa iza moa no nahalala izay hevitry ny Tompo, ary zovy no mpanolo-tsaina Azy? Sa iza no nanome azy aloha, mba hahazoany valin’izany? Avy aminy sy noho Izy ary ho Azy ny zavatra rehetra. Eny, Izy anie no homem-boninahitra mandrakizay. Amen.
Ianao no Piera, ary omeko anao ny fanalahidin’ny Fanjakan’ny lanitra.
Tamin’izany andro izany, nony tonga tany amin’ny faritany atao hoe: Sezarean’i Filipo i Jesoa, dia nanontany ny mpianany hoe: “Ataon’ny olona ho iza moa ny Zanak’Olona?” Ary hoy ireo taminy: “Ny sasany manao hoe i Joany Batista, ny sasany i Elia, ary ny sasany i Jeremia, na ny anankiray amin’ny mpaminany”. Dia hoy i Jesoa taminy: “Fa ianareo kosa, ataonareo ho iza Aho?” Namaly i Simôna Piera ka nanao hoe: “Ianao no Kristy Zanak’Andriamanitra velona”. Dia namaly i Jesoa ka nanao taminy hoe: “Sambatra ianao, ry Simôna zanak’i Joany, fa tsy ny nofo aman-dra no nanambara izany taminao, fa ny Raiko izay any an-danitra. Ary Izaho milaza aminao fa ianao no Piera (vatolampy) ary eo ambonin’izany vatolampy izany no hanorenako ny Egliziko, ary ny vavahadin’ny afobe tsy haharesy azy. Homeko anao ny fanalahidin’ny fanjakan’ny lanitra, ka izay rehetra hofehezinao ety an-tany dia ho voafehy koa any an-danitra, ary izay rehetra hovahanao ety an-tany, dia ho voavaha koa any an-danitra”. Ary tamin’izay, dia noraràny ny mpianany tsy hilaza amin’ny olona fa Izy no i Kristy.
Ry kristianina havana, ny finoantsika katôlika dia manainga antsika anio hivavaka ho an’ilay mpandimby raharaha an’i Masindahy Piera; koa angataho Andriamanitra hanilo azy, hahafahany manome hery vaovao ny Eglizy hamonjena an’izao tontolo izao.
Valy: Ry Zanak’Andriamanitra velona, tsofy rano re ity vahoakanao, tsofy rano izy e!
* Maro adidy ny Papa, koa angataho Andriamanitra hankahery azy handresy ny sarotra sy hiezaka hampiray ny kristianina rehetra.
* Teo amin’ny tantara dia nisy mpitondra fanjakana nanohitra ny fahefan’ny Papa, ary nisy Papa nihoatra ny raharaha ara-panahy nanirahana azy; koa mivavaha mba tsy hisy fifanjevoana sy fifanolanana toy izany intsony.
* Aty ririnina aty amintsika, ary migaingaina andro any amin’ny ilany avaratra amin’izao tontolo izao, ka maro ny mijaly sy fadiranovana; koa mangataha amin’ny Tompo mba samy homeny anjara hasambarana sy fivelomana ny zanany rehetra.
* Mivavaha isika iray Fiangonana, mba hohetsehin’ny Fanahy Masina matetika hanampy ny mpiara-belona, dia ho hita fa mbola velona eto amintsika i Jesoa, manohy ny asa famonjena sy fitiavana.
Tompo ô, enga anie ny Fanahy Masina hanampy ilay mpitondra ny Eglizinao ankehitriny sy hitari-dalana azy amin’ny fahazavany sy ny fitiavany, hitondrany ny Eglizy hiaraka aminao, ho tonga any amin’ny seranan’ny lanitra.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0504 s.] - Aidé par Evanjelyanio.org